बिग समाचार – Page2– BIG FM 101.2 MHz
Home » बिग समाचार (page 2)
‘पैसाको खेल रेडियोमा’, दशैंमा बिग एफएमको महा-आजिजा, कालीगण्डकी अक्सिजन ग्याँसको साथ
पोखरा, २२ असोज । पोखराको बिग एफएमले महान पर्व बडादशँैको अवसर पारेर यस वर्ष पनि रेडियो गेम शो ‘महा आजिजा’ गर्ने भएको छ । ‘पैसाको खेल रेडियोमा’ भन्ने थिममा खेलाईने रेडियो गेम शो असोज २४ गते घटस्थापनादेखि असोज २९ गतेसम्म चल्ने एफएमले जनाएको छ । यो पटकको ‘महा आजिजा’ लाई कालिगण्डकी अक्सिजन ग्याँस प्रालिले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । रेडियो …
बिग आइकनलाई ‘माया पब’ मा माया नै माया (भिडियोहरु), पुन मगर समाज यूकेको सम्मान
पोखरा, १३ असोज । बिग आइकनको सातौं संस्करणको टाइटल जितेपछि बेलायतमा सांगीतिक भ्रमणको अवसर मिलेको सुवास गुरुङका लागि आफ्नो भ्रमण अविष्मरणीय र गज्जब बन्यो । त्यहाँ उनले आफ्नो नेपाली समुदायबीच सांगीतिक प्रस्तुति राखे । सयौंको साथ मिल्यो । राजदुतसँग भेटघाटको अवसर सहित खेलकुद सम्बद्ध व्यक्तित्वबीच रहने मौका पाए । उनले आफ्ना हर कार्यक्रममा भन्ने गर्थे – ‘यी सब मौका बिग आइकन …
बिग आइकनलाई यूकेमा सम्मान, शुक्रबार डाँफेमा भव्य प्रस्तुति, शनिबार फेरि माया पबमा (भिडियोहरु)
पोखरा, १२ असोज । बेलायतमा सांगीतिक भ्रमणमा रहेका बिग आइकनलाई त्यहाँ मिठो आतिथ्यता मिलेको छ । सांगीतिक प्रस्तुति अन्तर्गत लण्डन स्थित नेपाली समुदायको रोजाईमा रहेका उत्कृष्ट र चर्चित रेष्टुरेण्टहरुमा बिग आइकन सुवास गुरुङ ब्यस्त छन् । शुक्रबार मात्रै उनले लण्डनकै प्लमस्टीडमा रहेको डाँफे रेष्टुरेण्टमा आफ्नो प्रस्तुति राखे । त्यहाँ दर्जनौ युवायुवतीले नाचेर गाएर साथ दिए । सुवासले घण्टौंसम्म श्रोतादर्शकका रोजाइकै गीत …
यूके स्थित नेपाली दुतावासमा ‘बिग आइकन’, संगीतमा हुरुक्क राजदुत सुवेदी मन्त्रमुग्ध
बेलायत स्थित नेपाली राजदुतावासमा ‘रातो र चन्द्र सूर्य’ घन्कियो । राजदुत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी सामु बिग आइकन सुवास गुरुङले राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत गीत मात्र गाएनन्, राजदुतकै रोजाईमा ‘मुसुमुसु हाँसेर हिँड्नेले’ रोमान्टिक गीत समेत गाए । राजदुत डा. सुवेदी आफै साहित्य र संगीतमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । डा. दुबसु क्षेत्री उनको साहित्यिक नाम हो । बेलायत पुगेपछि पनि दुबसुका दुई एल्बम …
बिग आइकन घन्किए यूकेमा, ‘माया पव’ मा नेपाली स्पोर्टस् र म्युजिकको फ्युजन (तस्विर र भिडियो)
पोखरा, ७ असोज । सांगीतिक भ्रमणका लागि बेलायत पुगेका सातौं बिग आइकन सुवास गुरुङले तीन दर्जन गीतमार्फत् त्यहाँ रहेका संगीत पारखीलाई मन्त्रमुग्ध बनाएका छन् । बेलायतमा पहिलो कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार राति लण्डनस्थित साउथ हारोमा रहेको माया पबमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका हुन् । हाम्रो नेपालमा, कति बाँचौला है माया, च्याङ्बा होई च्याङ्बा, चाइना कम्पनी, गुराँसै फुल्यो लगायतका तीन दर्जन गीत गाउँदा …
‘बिग आइकन’ बेलायत प्रस्थान
पोखरा, ५ असोज । सातौं बिग आइकन सुवास गुरुङ सांगीतिक कार्यक्रमका लागि बेलायत प्रस्थान गरेका छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने नेपाली भाषाको पत्रिका ‘यूरोपको नेपालीपत्र’ को निम्तो तथा काठमाण्डौ थापाथलीस्थित ब्रिटिश कलेजको व्यवस्थापनमा उनी बेलायत गएका हुन् । उनीसँगै बिग एफएमका अध्यक्ष महेश भण्डारी पनि विहीबार राति बेलायततर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । त्यहाँ करिब दुई हप्तासम्म सुवासले विभिन्न शहरहरुमा रहेका …
पुष्पाले जितिन् नोभा दही ‘बिग तीज, बिग धमाका’ मा सुनका गहना, १२ जनाले जिते जनही १ हजार
पोखरा, २७ भदौ । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर प्रदेशकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो बिग एफएमले सञ्चालन गरेको रेडियो गेम शो ‘बिग तीज बिग धमाका’ मा पोखराकी पुष्पा राईले सुनको गहना जितेकी छिन् । पोखरा २६ विजयपुरकी राईले बम्बर उपहार आधा तोलाको सुनको गहना जितेकी हुन् । फिस्टेल डेरी प्रालिको उत्पादन नोभा दहीसँगको सहकार्यमा तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको गेम …
बिग एफएमको नोभा दही ‘बिग तीज, बिग धमाका’ आइतबारदेखि, बम्पर प्राइज सुनको गहना
बिग न्युज, पोखरा । हरेक चाडपर्व होस् या नयाँ वर्ष । जहिल्यै रेडियो ईभेन्टमार्फत स्रोतासँग नजिकिने पोखराको बिग एफएम १०१.२ ले अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यसपटक पनि तीजको अवसरमा ‘बिग तीज बिग धमाका’ रेडियो गेम शो सञ्चालन गर्ने भएको छ । इभेन्ट, प्रोग्राम र न्यूज । तीन पक्ष सबल बनाउँदै यस प्रदेशकै सर्वोत्कृष्ट बनेको रेडियोले नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर …
हेर्नुहोस पोखराका यी ठाउँमा जोडिदै छ फ्रि वाईफाई
Anup Poudel बिग समाचार
पोखरा, भदौ १९ । पोखराका विभिन्न १० ठाउँमा फ्रि वाइफाई सेवा जोड्नका लागि सम्झौता भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले वल्र्डलिंकसँग सहकार्य गरेर १० ठाउँमा निशुल्क वाईफाई जोड्न लागेको हो । सम्झौतापत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र वल्र्ड लिंक प्रालिका सिइओ केशव नेपालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापत्र अनुसार पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महेन्द्रपुल, वडा नम्बर ५ को चिल्डे«न पार्क, बाराहीघाट, मनिपाल अस्पताल, …
‘मिस पोखरा’ सफल बनाउन जेसिआई पोखरालाई बिग एफएमको साथ
२ दशक लामो इतिहास बोकेको ब्युटी कन्टेष्ट मिस पोखराले पछिल्लो समय निरन्तरता पाइरहेको छ । बीचमा रोकिएको मिस पोखरा सौन्दर्य प्रतियोगिताको यो दशौं संस्करण हो । मिस पोखराकी विजेता कुनै अडिसन विना नै मिस नेपालमा सहभागिता जनाउन पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ, पोखराकै इज्जत गाँसिएको यस ब्युटि कन्टेष्टलाई सफल बनाउन गत वर्षहरुमा झैं बिग एफएम १०१.२ मेगाहर्जले साथ दिएको छ …